ए १ पनि पुगेनछ ? - Sajha Mobile
Posts 14 · Viewed 4353 · Likes 15 · Go to Last Post
· Snapshot 1262
· Snapshot 1599
Last edited: 20-Dec-20 01:17 PM
· Snapshot 1596
· Snapshot 1624
· Snapshot 1791
· Snapshot 2019
"अनि एस्तो आंटरप्रनिउर मान्छेले त् मेरो ट्रंप बाबालाइ नै भोट हाल्न भो होला नि होइन ?" - नाज ब्रो
"तिनले ठुला मान्छे संग कर उठाएर हामी जस्ता साना तिन ब्यापारीको उद्दार गर्छु भनेका छन् हेरौ के हुन्छ ।" - टिपीएस ब्रो
हे प्रभु कसरि मिस भए छ, ब्रोको यो स्टेटमेन्ट ! सार्है मन खिन्न पार्यो !
उता मेरा निउ योर्कका सबै आन्टरप्रनिउर साथिहरुले मेरो बाबालाइ भोट हाल्न भो त्यो साला खाते ब्लु स्टेट भएर पनि ! मेरा साथिका अरु बिजनेस बोसहरु सबैले बाबालाइ नि ! किनकी २००८ को क्रयाशमा खाते ओबामाले स्टिमुलस चेक जति सबै "टु बिग टु फेल" ब्याङ्कलाइ देको थियो ! मेरा साथिका बसहरुले भन्न भाको एस पालि त् हामिलाइ बाबाले बिजनेस डुब्न बाट बचाउन भो भनेर सबले बाबालाइ भोट दिन भाको !
खोइ ब्रोले कंहा बाट तेस्तो कूतर्क लगाउन भाको ! ठुला ठुला धन्याढयले खुन पसिना एक नजोडी, गेडा मात्र खेलाएर पैसा बनाको हो ? के ब्रो हजुर दुइटा स्टोर देखि मै सिमित हुने ?
हिजो खाडीमा जान भइ आर्काकोमा घण्टा हान्न भो, आफ्नो परिवारलाइ छोडी, आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न खुन पसिना बगाउन भो ! आज तेही जोगाको पैसाले एउटा होइन दुइटा स्टोर खोल्न भो ! आज आफ्नो परिवारलाइ मात्र नभएर आफ्नो काम दारको परिवारको पेट पाल्न भाको छ ! भोलि दुइ बाट दस स्टोर पुग्ने छ ! अनि भोलि यी लिबरलहरुले तपाइँको खुन, पसिना, मेहनत, लगन, सेल्फ स्याक्रिफाइस कहिले देख्ने छैन, तपाइँ हजुरको पैसामा मात्र आँखा गाढने छ किनकी तिनका आँखामा तपाईनि "ठुला मान्छे" हुने छन् ! तिनै "ठुला मान्छे" को भिजन र इनोभेसनको कारन हाम्रो पनि जीवन स्तर माथि उक्लेको छ ! फ्री मार्केट क्यापिटलिजमले सबैलाइ उन्नति गर्ने अवसर दिन्छ, समाजलाइ संगै माथि उचाल्छ ! सबै विन विन सिचुएसनमा हुन्छ ! 😔
Last edited: 03-Dec-20 05:59 AM
· Snapshot 2337
"तिनले ठुला मान्छे संग कर उठाएर हामी जस्ता साना तिन ब्यापारीको उद्दार गर्छु भनेका छन्"
हामि नेपालीहरु कत्ति अबुझ छौ है ! "ठुला मान्छे" ले तिर्या तिरै हो कर ! ल बधाई छ हामि आर्थिक दाशीहरुलाइ बाइडेनलाइ भोट हालेकोमा ! आन्टरप्रनिउर जस्ता मान्छेहरुको सोचाइ पनि एस्तो होला भनेर कहिले सोचेको थिएँन ! हामि त् झन् घन्टे ! आखिर पेलिने त हामि जस्तै घन्टेहरु हुन् ! साला धोतिहरुले हामि जस्ता घन्टेहरुको कमाको तलब बाट 20% - 30% रगत चुस्थे, तेसमाथि कर ! हामि लाइ थाहा छ नि आर्थिक दासत्व कस्तो हुन्छ भनेर ! खैर बुझ्नेले बुझी खान्छ , न बुझ्नेले मुझी खान्छ ! होइन त् हाम्रो टि पी एस ब्रो ? 🙏🤓
Last edited: 05-Dec-20 08:27 PM
· Snapshot 3392
हेर्दै गर्नुस न … कसरि यो फ्रड कुत्ताले स्मल बिजनेस खत्तम पार्छ … 😭😂🙏
Last edited: 15-Jan-21 10:04 AM
Visitor is reading Positive about Maoist and Nepal
Visitor from DE is reading Quote from Ansar al Sunna
Visitor from GB is reading UN Going to Nepal For arm management
Visitor is reading Room mates in atlanta
· Posts 63 · Viewed 16762 · Likes 38
· Posts 50 · Viewed 46363 · Likes 4
· Posts 559 · Viewed 646561 · Likes 343
· Posts 12 · Viewed 4594 · Likes 7
· Posts 39 · Viewed 14160 · Likes 14
· Posts 21 · Viewed 6917 · Likes 2
· Posts 16 · Viewed 12021 · Likes 4
· Posts5· Viewed 2798
· Posts 18 · Viewed 64021
· Posts 48 · Viewed 15386 · Likes 1